UJennifer-Iintaba ziya kuvuka-ukubala ukuya eBukumkanini
"U-2021 usendleleni yokuba ngunyaka ophula irekhodi kwiinyikima ezinkulu kunye neentaba-mlilo," utshilo umxholo osemva nje.Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 7; israel365news.com Oko kusikhumbuza ngeziprofeto ezininzi ezinikwe yiNkosi yethu uYesu kumboni waseMelika	Jennifer , phakathi kwabanye. Nanku kodwa isampulu yomxholo osisiseko semiyalezo yakhe: indalo iya kuphendula kwizono zoluntu…
Lowo wenza iintaba, umhlaba, nako konke okukuwo, uyabazi ubunzulu bezono zakho, nokuba uphendula njani umhlaba kuzo.
Bantu bam, aya kufikelela esiphelweni amaxesha enikuwo. Usemfazweni kwaye yimfazwe elwelwa umphefumlo wakho. Ndim, Yesu, oza kulumkisa ukuba elixesha lesiphithiphithi lisaqala yiyo loo nto kubalulekile ukuba uhlale ugxile emnqamlezweni. Uya kujamelana nezilingo ezininzi phakathi kosapho lwakho kunye nabahlobo kwaye kuya kufuneka uthathe isigqibo: Indlela yam okanye eyomhlaba. Unokuba nguwe kuphela ome kwaye ujonge isihlwele xa ukhetha ukuhamba ekukhanyeni kwam. Ayondlela ilula, kodwa indlela eya eKalvari izakukusa eBukumkanini. Bantu bam, njengoko nditshilo kuni, zandiseni ixesha lakho emthandazweni. Biza iingelosi zakho ezingabagcini bakho ukuba zikuncede kuba uSathana ukhuphe oomoya abaninzi abakhohlakeleyo ukubambisa umphefumlo wakho. Akafuni abo behlabathi, ufuna abo bazabalazela ukuhamba ebungcweleni.
Bantu bam, utshintsho oluninzi lusemgubasini kwaye lo mhlaba uzanyikima ungcangcazele. Isizwe ebesilele siza kuvuswa kungekudala. Imiphefumlo emininzi engendawo ilibele kukuhlasela. Iintaba ebezilele ziya kuvuswa kungekudala kwaye ziya kuzisa izakhiwo ezenziwe ngabantu kuqhekeko. Uthuthu olukhulu luya kucoca isibhakabhaka kwaye luya kwenza ukuba kutshabalale uninzi kuba uthuthu luya kulandela amakhonkco omlilo. Bantu bam, qaphela imeko yomphefumlo wakho kuba ezi ziganeko ziya kutyhileka - zisemnyango, kodwa indawo oya kuyo ngonaphakade ifike kumgangatho womphefumlo wakho. Mamela inkosi yakho, kuba ndinguYesu…
Bantu bam, ixesha lifikile, ilixa ngoku, neentaba ezileleyo, zisaya kuvuswa. Nkqu nabo bebelele enzonzobileni yeelwandle baya kuvuka ngamandla amakhulu. Bantu bam, ngoku lixesha lokuqinisa ubudlelwane bakho noBawo wasezulwini kwaye ubudlelwane bakho buqiniswa kuphela ngomthandazo.
Bantu bam, aniyi kusindiswa kwezi ziganeko, kuba uluntu luye lwaqhubeka nokungahoyi izicelo zam, amazwi am esilumkiso. Eli lixesha lokuba uvule amehlo kunye neentliziyo zam emazwini am kuba kanye njengokuba ndinguMsindisi wakho onenceba owafela ukukuhlangula ezonweni zakho, ndiphinde ndize kukuxwayisa ukuba ubomi bakho abukholisi Kum. Vala iziphazamiso kwaye vumela iindlela zehlabathi ziwele ecaleni kuba izinto zeli hlabathi zinokuhlanjwa, kodwa umphefumlo wakho uphila ngonaphakade.
Njengoko uqala ukubona udaka lusiwa kwezi ntaba kuya kukhutshwa imiphefumlo emibi, ke hlala ulindile. Musa ukoyika ngeli xesha, endaweni yoko yamkele usazi ukuba ulandela ukuthanda kukaYihlo osemazulwini uyakusindiswa. Ngoku phuma uphendule, uphendule ngokuphila umyalezo weVangeli, ngokuphila iMithetho nangokucoca umphefumlo wakho rhoqo. Ngoku yiba noxolo kuba ndinguYesu kwaye inceba yam nobulungisa buza koyisa.
Bantu bam, niphi na? Baphi abantwana bam? Bambalwa kakhulu kuni abaza kundibona kwi-Sacramente Yam Esikelelekileyo. Ngoku lixesha labantwana abathandekayo beentaba ebezilele ziya kuvuswa kungekudala kwaye nonxibelelwano lwakho luza kuma ngokukhawuleza.
… Iya kuba lixesha lesifo esikhulu, indlala, izaqhwithi kunye neenyikima kwaye iyakubhubhisa iindawo ezininzi. Iintaba ziya kuvuka, kwanabo balele ezinzulwini zolwandle. Kwakhona, ndithi kuni, aniyiqondi into yokuba niya kuvuswa.
Bantu bam, ilixa lenceba enkulu liphezu kwakho. Iintaba seziqalile ukuvuka, njengoko benditshilo kuwe, ezi ziganeko ziya kuza njengebhokisi ekwiindlela zetreyini. Njengokuba isiganeko sigqityiwe omnye uya kuvuka. Njengokuba umntu eqala ukwakha imimoya uyakuyihlisa. Eli hlabathi aliyondawo yentuthuzelo, kodwa yindawo yokwexeshana yokukulungiselela izulu.
Bantu bam, yabona imiqondiso yeentsuku zotshintsho olukhulu zikufuphi. Yeha nina baziziyatha abangakholwayo ukuba ndinguYesu uMesiya wenu wenene. Yeha nina baziziyatha abangakholwayo ukuba ndithumela la mazwi esilumkiso ngabathunywa bam abaninzi kwihlabathi liphela. Andizanga kukuthumela la magama ukuba ungawanaki kuba ngabo abangawahoyiyo amazwi am abaya kutshabalala.
Bantu bam, ngokuqhwanyaza kweliso ninokuma phambi kwam. Ngokuqhwanyaza kweliso umntu uya kuqubuda emadolweni. Iilwandle azisayi kuzola kwaye iintaba ziya kuvusa ukuthumela uthuthu ukugubungela umhlaba ebumnyameni. Amakhonkco omlilo aya kuqala incopho, bantu bam. Musa ukukhohliswa yimiqondiso yokuba umntu uya kuzama ukuthethelela ezi ziganeko kwaye, kuyo yonke le ntshabalalo, eli hlabathi liyacocwa. Kungenxa yesandla esilungileyo sikaBawo wam ubomi buya kubuyiselwa, ubomi babancinci bam.
Esona sono sikhulu kukhupha isisu kwaye andizukuvumela obu bubi buqhubeke. Ezi ndawo apho ubutyebi kunye namandla ehlabathi abakho kakhulu ziya kuza zisiwa. Mininzi imiphefumlo engendawo efuna ukuthoba uhlanga oluye lwaba yinkokheli yehlabathi, ukanti ikwayinkokeli yokubulala abantwana bam. Njengokuba umhlaba uqala ukubonisa iimpawu zobomi obutsha uluntu luya kuvuswa ngomqondiso omkhulu. Musa ukoyika ngeli xesha, lo mqondiso, kuba iya kuba lixesha lenceba enkulu.
Ulwandle alusazinzanga, amakhonkco omlilo azakufikelela encotsheni kwaye iindawo ezininzi ziya kunyibilika njengomlotha emlilweni… Eli xesha lokuzola liza kuphela kungekudala. Lumka, ulumkele idabi liqhubeka kwaye izilingo kunye nokubandezeleka kwakho kuya kwanda. Kungenxa yokwaphulwa koMthetho wesihlanu apho eli hlabathi liza kubona isohlwayo esikhulu… Lumkela izizwe ukuba ziya kuvukelana kungekudala eziza kuthumela ukuphazamiseka okukhulu kwindlela yakho yokuphila. Iintaba ziya kuvuka, kwanabo bangaphantsi kwezantsi zolwandle.
Ndim, Yesu, ndize kukuxwayisa ukuba iinqanawa esele zilele ziya kuvuka kungekudala, zithumele umlilo omkhulu nothuthu. Amanzi awasekho kuzola kwaye amaza amakhulu esilumkiso kungekudala aza kubiza abaninzi kwiyure yabo yomgwebo. Iindawo ezibe yingcambu yobubi obunje apho uninzi lwazo lufikelela esiphelweni kungekudala ziya kukhukuliseka. Iintaba ziya kuvuka kwaye ziyaxokozela phakathi kwezizwe ezibonisa ulwahlulo lokwenyani.
Kuba, njengoko bendikuxelele, xa umhlaba uqala ukubonisa iimpawu zobomi obutsha, uluntu luya kuvuswa [Ntlakohlaza okanye ngeLente?]. Ezi ziganeko ziya kuza njengebhokisi ekhatywayo kwiitraki kwaye ziya kugungqisa kulo lonke eli hlabathi.
Bantwana bam, lindani intaba esele ilele izakuvuka kungekudala ibambe abantu. Kwakhona ndithi kuni, kungokuqhwanyaza kweliso ukuba abaninzi baya kubizwa beme phambi kwam. Phila umsebenzi wakho kwaye uqaphele imeko yomphefumlo wakho.
Lungiselela ukufela ukholo Ndithi kuwe, eli lixesha kwimbali eliza kuvela elona nani likhulu labangcwele. Iintaba ziya kuvuka, iilwandle ziya kunyuka, nkqu neenkwenkwezi esibhakabhakeni ziya kubonakala ngathi zisemfazweni. Ummelwane ngokuchasene nommelwane… kanti phakathi kwayo yonke le nto, umhlaba uyahlanjululwa kukungcola kwawo.
Iliza elikhulu kungekudala liza ngaphambili kumazwe apho inani elikhulu liphelela khona, iliza eliya kuqala kwiziqithi kwaye liphele kwisiqithi esimele inkululeko - kodwa elona nani likhulu labantwana bam bahluthwe inkululeko yabo. Bantu bam, imililo iza kuza, iintaba ziya kuvuka kuba umhlaba uya kunyikima ungcangcazele. Iya kuba lixesha apho abaninzi baya kugcwaliswa kukuthandabuza nokudideka. Iya kuba lixesha apho abaninzi baya kubulawa ngenxa yokholo lwabo kwaye elona nani likhulu labangcwele liya kuvela. Bantu bam, eli hlabathi aliyi kuphumla emfazweni, kwizifo nakwindlala, kuba abantu bam kungekudala baya kujongana nentshabalalo enkulu ngenani labantwana bam ababuleweyo ngokukhupha isisu. Xa uwala uMyalelo wesihlanu uyawala uMyalelo wokuqala. Ube lihlabathi elingenzi nto esonweni, lokwenza ububi. Eli hlabathi liyakuphuma ebuthongweni babo kuba usuku olutsha selusondele, kuba ndinguYesu.
Imfazwe iya kuvuka kwaye iyokuwa amandla akho emali kwilizwe lakho, kuba nabazizityebi baya kuba phakathi kwamahlwempu; Utshintsho kwimali yakho luza kuvela kungekudala. INtshona iya kugungqiswa kwindawo yayo kwaye iya kuvusa iintaba ezingaphantsi kolwandle. Ndiya kuphakamisa isandla sam sokunene kwaye iilwandle ziya kuphakama, kwiindawo ezikhoyo, ezingasayi kubakho. Qokelela ukutya kwakho ngoku kungekudala uza kubona isibetho esikhulu esiza kubiza abaninzi ukuba beme phambi kwam.
Mntwana wam, iintaba ziya kuvuka, iinduli ziya kuqengqeleka ngamandla amakhulu njengoko umhlaba uvuleka embindini waseMelika kwaye awusayi kuphinda ubone iGrand Canyon, endaweni yoko, enkulu. Uza kubona imfazwe iqala njengokuba umntla uzakutshisa imijukujelwa enxamnye nomzantsi, njengoko ezi Korea zimbini zingenakwenza uxolo omnye komnye. Ndithi kuni bantwana baM, nifuna ukufumana uzinzo kwiimarike, kodwa ndithi kuni uxolo lwenu alukho kwiindlela zehlabathi, kuba lude uluntu luguqukele kwinceba yaM, ingxubakaxaka enkulu iza kuza…
Qaphela: Abanye ababoni kwi-Countdown to the Kingdom kutsha nje batshilo ukuba amalanga elanga azakudlala indima ekucocweni komhlaba (jonga Apha kwaye Apha). Izifundo ezininzi zifumene unxibelelwano phakathi komsebenzi welanga kunye omkhulu iinyikima. Ngaba ezi zigijimi zasezulwini zizenzekele? Bona:
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 7; israel365news.com
exhonyiweyo Jennifer, imiyalezo, Ukohlwaywa kobuThixo, Iintlungu zabasebenzi.
← Luz-Amarhe eMfazwe…